Priyanka Chopra waxay farriin taabasho ah u dirtay aabeheeda ka maqnaa dhalashadeeda: "Waan kaa doonayaa halkan" - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Priyanka Chopra waxay farriin taabasho ah u dirtay aabeheeda ka maqnaa dhalashadeeda: "Waxaan jeclaan lahaa inaad halkaan joogtid"
Priyanka Chopra waxay fariin taabaneysa u direysa aabeheeda oo ka maqan dhalashadiisa: “Waxaan rabaa inaad halkaan ku hesho”
Maalinna maalin la'aan ayaa la maraa Priyanka Chopra ha ka fikirin isaga. 2013, Nick Jonas xaaskiisa aabihiis laga waayey, Ashok Chopra, kadib kansar. Sannad walbana, Bishii Agoosto 23, iyadu waligeed kuma guuldareyso inay u rajeyso dhalasho farxad leh, inkasta oo uu dhaafay. Sannad kasta, maalintaas, Sid (walaalkiis, Ed) iyo naftayda waxay raadinayeen dariiqooyin aan kugula yaabinno… laakiin waligeen kuma aanan guuleysan inaan sidaas yeelno! Had iyo jeer waad ogtahay wax walba ... "waxay ku bilaabaysaa Aktarka farriin aad u dhaqdhaqaaq badan.
"Marka, waxaan rajeynayaa in meel kasta oo aad joogtid, aad ogtahay inaad nala joogto maalin kasta. Waxa aan sameeyo oo dhan, waxaan ka fikiraa dhiirigelintaada ... Meel kasta oo aan sameeyo, waxaan weydiisanayaa caddeyntaada ... Waxyaabaha igu dhaca oo dhan, waxaan ugu mahadcelinayaa ducooyinkaaga. Aabbe dhalasho wacan, waxay ku qortaa halyeeyo muuqaal ah aabeheeda, oo ay ku dhuftay heesta uu ugu jecel yahay, oo uu si joogto ah ugu heesi jiray xaaskiisa, ka hor inta uusan gabagabayn: Waxaan jeclaan lahaa inaad maalin walba halkan joogtid! Waan ku jecel nahay.
Sanad walba maalintaan Sid waxaan jeclaanlahaa inaan ku arko halkan! Marwalba waad ogtahay wax walba ... Marka waxaan rajeynayaa inaad halkaan joogtid, waad ogtahay waxa aad nala joogto maalin walba. Wax kasta oo aan sameeyo, waxaan uga fikiraa dhiirigelintaada ... Meel kasta oo aan sameeyo, waxaan kaa codsanayaa xaqiijintaada ... Waxkasta oo igu dhaca, waxaan uga mahadnaqayaa barakadaada. Dhalasho farxad leh Aabe. Waxaan jeclaan lahaa inaad maalin walba halkaan joogtid! Waan ku jecel nahay @siddharthchopra89 @madhumalati PS - heesta asalka waxay ahayd mid ka mid ah aabaha uu ugu jecel yahay ... midda uu had iyo jeer u heesi jiray hooyaday ❤
Fariin ay wadaagaan Priyanka Chopra Jonah (@priyankachopra) Aug 23, 2019 at 10: 40am PDT
Farriin aad u socota Priyanka Chopra oo hadda ninkeeda raacaysa Nick Jonas inta lagu gudajiray socdaalkiisii ​​Jonas Brothers. Ka dib markii lagu arkay safar uu la socdo Sophie Turner iyadu kama tagayso, saaxiibkii Meghan Markle wuxuu ku talaabsaday 10 bishii Agoosto ee la soo dhaafay rooga casaanka ee Beautycon LA. Munaasabadda ayay ahayd gaar ahaan sexy ee tuxedo ah, taas oo ay ku xidhnayd dusha hufan.
Priyanka Chopra - Sawir qaade inta lagu gudajiray maalintii ugu horreysay ee Beautycon oo ku taal Xarunta Shirarka ee An Los
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/priyanka-chopra-adresse-un-message-emouvant-a-son-pere-pour-son-anniversaire-je-1015420
Meghan Markle wuxuu sameyn doonaa "Xujaaj" qalbi jab leh oo uu la jiro Amiir Harry iyo Archie Harrison
Beverly Hills wakiilka guryaha ma guurtada ah ee lagu eedeeyay boobka guryaha caanka ah, oo ay ku jiraan Usher iyo Adam Lambert - dadka